Ahoana ny fomba fampidirana sary ao amin'ny iCloud Photo Library amin'ny solosainao | Applelised | Avy amin'ny mac aho
Iray amin'ireo zava-baovao efa ananantsika iOS 8 es iCloud Photo Library, fomba iray azo antoka sy azo antoka kokoa noho ny rehetra izay mamela antsika hanana ny sarintsika rehetra azo idirana amin'ny fitaovana iOS rehetra ary koa avy amin'ny tranonkala amin'ny alàlan'ny icloud.com. Raha efa navadik'ity serivisy vaovao natolotry ny Apple ho tena ilaina tokoa ny fahalalana ny fomba fampidirana ny sarinao amin'ny iCloud Photo Library avy amin'ny Mac na PC-nao.
Apetraho ao amin'ny iCloud Photo Library ny sarinao ary ampidiro na aiza na aiza
Hatramin'ny nanatontosana ny endrik'izy ireo finday avo lenta, ary indrindra ny momba ilay iPhone malalantsika, dia lasa karazana "mpaka sary" isika rehetra ary, ilay iray faran'izay kely indrindra, dia naka sary maro isan'andro. Nandritra ny taona maro dia an-jatony isika, ary sary an'arivony maro aza voatahiry anaty lahatahiry amin'ny alàlan'ny solo-saintsika, na amin'ny serivisy fitahirizana rahona hafa. Ankehitriny miaraka amin'ny iCloud Photo Library azonao atao ny mampakatra ireo sary rehetra ireo avy amin'ny Mac na PC anao, na avy amin'ny kapila mangatsiaka ivelany, ary azonao alefa amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fitaovanao iOS (iPhone, iPad na iPod Touch) ary koa avy amin'ny solosaina rehetra amin'ny alàlan'ny serivisy icloud .com na dia tokony hotadidinao aza fa mety tsy maintsy atao manitatra ny drafitra angonao amin'ny iCloud.
Mampakatra ireo sary rehetra azonao tamin'ny fotoana nandehananao ny solosainao iCloud Photo Library Mila manaraka ireto dingana tsotra ireto fotsiny ianao:
Raha mbola tsy nampihetsika ny serivisy ianao dia ataovy izany, tena ilaina ny manohy. Lazainay aminao ny fomba fampiasana iCloud Photo Library.
Raha vantany vao navadika ny serivisy dia tsidiho ny iCloud beta beta.icloud.com (TSY ny kinova icloud.com mahazatra).
Midira amin'ny fizarana Photos
Eo ankavanan'ny ambony dia ho hitanao ny bokotra "Alefaso". Tsindrio eo.
Hisokatra ny fikandrana vaovao amin'ny browser-nao. Mikaroha ary safidio ireo sary tianao hampidirina iCloud Photo Library ary kitiho ny safidio.
Eo amin'ny farany ambany amin'ny efijery dia ho hitanao ny bara fandrosoana; Rehefa tapitra ny fampakaram-bady dia ho hitanao eo amin'ny fitaovanao iOS rehetra ny sarinao ary koa amin'ny alàlan'ny tranokala icloud.com.
Raha tianao ity torohevitra tsotra ity dia aza hadino ny mitsidika ny faritra misy anay Tutorials izay ahitanao torohevitra sy tetika am-polony toa ity ho an'ny fitaovana paoma manaikitra rehetra anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba fampidirana sary ao amin'ny iCloud Photo Library amin'ny solosainao
Salama tsara Jose,
Misaotra an'ity lesona ity. mazava sy tsotra. Nanaraka an'io aho ary manana olana. Rehefa tonga eo amin'ny fizarana faha-4 aho dia tsy misy ny bokotra "Send".
Nividy toerana fanampiny aho (ary efa natolotra ahy ny faktiora) ary mbola tsy afaka mampakatra ny sariko aho. Inona no torohevitra omenao ahy?
Manana solosaina finday misy Windows 10 aho
Salama Alejandro, raha ny tena izy tsy misy bokotra "Send" fa misy bokotra "Upload", novain'izy ireo fotsiny ilay anarana. Tsindrio "Load", ary tohizo hitovy tanteraka ny fizotrany. Mametaka pikantsary iray aho.
Miarahaba ary misaotra betsaka anao nitsidika anay sy nandray anjara.
nayeli dia hoy izy:
Efa afaka nametraka ny sariko tany amin'ny icloud avy amin'ny solosainako miaraka amin'ilay pejy aho, fa rehefa manokatra ny app sary amin'ny iphone-ko aho dia tsy hita izay ampakarina, ary efa navako ny sary hampidirina ao amin'ny faritra icloud photos any fanahafana
Valio i nayeli
Ovao na esory ny kaontinao iCloud ao amin'ny OS X